JUXAA oo uga digay Dowladda Federaalka inay faragelin ku sameyso Doorashada Puntland | SAHAN ONLINE
JUXAA oo uga digay Dowladda Federaalka inay faragelin ku sameyso Doorashada Puntland
GAROOWE – Wasiirkii hore ee Arrimaha Gudaha Dowladda Federaaliga ah ee Soomaaliya Cabdi Faarax Siciid(Juxaa) ayaa uga digay dowladda Federaalka inay faragelin ku sameyso Doorashada dhacayso Puntland.
Cabdi Faarax Siciid(Juxaa) oo magaalada Garoowe kaga dhawaaqay in uu yahay Musharax u taagan xilka Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in Puntland galeyso doorasho u gaar ah oo masiirkooda iyo rabitaankooda ku dhisan.
…..” Puntland waxay galeysaa doorasho u gaar ah oo masiirkeeda iyo rabitaankeeda ku dhisan, waxaan uga digeynaa dowladda Federaalka iyo cid kasta in aysan arrintan faraha la soo gelin…” ayuu yiri Juxaa.
Juxaa sidoo kale waxa uu ka hadlay qorshihiisa siyaaadaeed iyo waxyaabaha muhiimadda uu siinayo haddii uu ku guuleysto dooraahada,wuxuuna dhaliil xoogan usoo jeediyay Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas.
Cabdi Faarax Siciid Juxaa ayaa kamid ahaa Gollaha Wasiirada ee uu sanadkii hore magacaabay Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Kheyre hasa yeeshee waxaa xilka laga qaaday horaantii bishii Janaayo ee sanadkan ka gadaal 9bilood oo uu hayay xilka Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka.